Xasan Sheekh oo talo anfaceysa u gudbiyay madaxweyne Farmaajo. | XAL DOON
Home NEWS Xasan Sheekh oo talo anfaceysa u gudbiyay madaxweyne Farmaajo.
Xasan Sheekh oo talo anfaceysa u gudbiyay madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhanka kale kamid ah Musharixiinta 2021 ayaa ka hadlay go’aanka Xukuumadda & Dowlad Goboleedyada la safan ay ka qaateen doorashada & eedeyntii ay u jeediyeen dhinacyada diidan hab maamulka iyo guddiga maamulaya doorashadaas.
Xasan ayaa sheegay in dalka uu haatan kala taagan balse aan u baahneen in la abuuro sabab sii kala qaybiso oo dhaawac ku ah midnimada, Wadajirka & Dowladnimada Soomaaliya oo muddo dedaal xooggan la gelinayay sidii la isugu heyn lahaa.
Dowlad Goboleedyada la safan Xukuumadda ee kala ah Hir-Shabeelle, Galmudug & Koofur Galbeed waxa uu sheegay in aysan aragtidooda ku metlin dadka shacabka ah oo ay hoggaanka u yihiin, maadaama ay daneynayaan doorasho la isla ogol yahay sida uu hadalka u dhigay.
“Walaalayaal dalkaan haddu ayuu kala taagan yahay, Somaliland ayaa naga maqan oo leh gooni ayaan isu taaagnay oo muddo la raadinayay wadaxaajoodkeeda, qaar kale in maanta sabab kale loo abuuro oo ay berri yiraahdaan gooni ayaan isu taagnay suuragal ma ahan, waxa ay dhaawacee nidminada dalkaan, wadajirka umadda & Dowladnimadeena” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhanka kale Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in aysan isku mid ahayn doorashada federaalka & tan Dowlad Goboleedyada oo qaarkood ay boobtay Dowladda Federaalka, waxaana uu u digay Madaxweynaha Soomaaliya in uu askar u adeegsado sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu sheegay in lagu wareejiyay dal wadajira, balse laga doonayo in haddii uu wareejinayo in uu raaco dhabbihii shalay oo ah nidaamka lagu heshiiyay.
“Haddii shalay Doorashooyin xoog & qori lagu boobay tani way ka duwan tahay, haloo tartiibiyo oo hala wadahadlo, Madaxweynaha dalkaan oo is heysta, is rabo oo go’aan wadajir ah gaaro ayaa lagu wareejiyay, Gadaal in uu fadhiisto oo diido in uu la hadlo dadka saamileyda ah xal ma noqoneyso, hana fuliyo ballantii uu qaaday oo ahayd in uu noqonayo oday Soomaaliyeed” Sidaasi waxaa yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Xukuumadda Federaalka & Madax Goboleedyada Galmudug, Koofur Galbeed & Hir-Shabeelle oo horay u diyaariyay xubnaha Guddiyada ku metalaya Doorashada ayaa ku dhawaaqay in ay ku dhaqaaqayaan qabashada Doorasho aysan ku jirin Dowlad Goboleedyada Puntland & Jubbaland.
Mareykanka oo ugu dambeyn la baxay askartiisii ku sugneyd Soomaaliya.